PDF Isixhobo sokulungisa. PDF Ukubuyisela isoftware. Lungisa PDF Ifayile.
DataNumen PDF Repair is eyona PDF isixhobo sokubuyisela emhlabeni. Ingayilungisa iAcrobat eyonakeleyo okanye eyonakeleyo PDF iifayile kwaye uphinde ufumane idatha yakho kangangoko kunokwenzeka, ngaloo ndlela unciphisa ilahleko kurhwaphilizo lwefayile.
4.90 / 5 (ukusuka kwiivoti ezili-1,637)
Ngoba DataNumen PDF Repair?
Iimpawu eziphambili kwi DataNumen PDF Repair v3.0
Inkxaso yokufumana zonke iinguqulelo zeAcrobat PDF iifayile.
Inkxaso yokufumana kwakhona amaphepha kunye nemifanekiso kwi PDF amaxwebhu.
Inkxaso yokulungisa eyahlukileyo PDF iimpazamo zefomathi yefayile.
Inkxaso yokulungisa PDF iifayile ezingahambelani neefayile ze- PDF isikhombisi.
Inkxaso yokulungisa PDF iifayile kwimithombo yeendaba eyonakeleyo, njengediski yefloppy, Zip Iidiski, iiCDROM, njl.
Inkxaso yokulungisa ibatch ye PDF iifayile.
Inkxaso yokufumana nokukhetha ifayile ye PDF iifayile ezizakulungiswa kwikhompyuter yendawo.
Ukudityaniswa kwenkxaso kunye neWindows Explorer, ukuze ukwazi ukulungisa iAcrobat PDF ifayile kunye nemenyu yokuqulathiweyo yeWindows Explorer ngokulula.
usebenzisa DataNumen PDF Repair Ukufumana kwakhona ukonakala okanye ukunganyaniseki PDF iifayile
Xa iAcrobat yakho PDF iifayile zonakalisiwe okanye zonakele kwaye awukwazi ukuzivula ngokwesiqhelo, ungasebenzisa DataNumen PDF Repair ukuskena ifayile ye PDF iifayile kunye nokufumana kwakhona idatha kwiifayile kangangoko kunokwenzeka.
Phawula: Ngaphambi kokufumana kwakhona ukonakala okanye ukonakala PDF ifayile nge DataNumen PDF RepairNceda uvale iAcrobat Reader kunye nezinye iinkqubo ezinokufikelela kwifayile ye- PDF ifayile.
Khetha eyonakeleyo okanye eyonakeleyo PDF ifayile eza kulungiswa:
Ungafaka igalelo PDF igama lefayile ngqo okanye ucofe i iqhosha lokukhangela kwaye ukhethe ifayile. Unokucofa kwakhona iqhosha lokufumana PDF ifayile izakulungiswa kwikhompyuter yendawo.
Ngokuzenzekela, DataNumen PDF Repair iya kugcina i-fixed PDF ifayile kwifayile entsha enegama elithi xxxx_fixed.pdf, apho i-xxxx ligama lomthombo PDF ifayile. Umzekelo, kumthombo PDF ifayile yonakele.pdf, igama elingagqibekanga lefayile emiselweyo iya konakaliswa -Fixed.pdf. Ukuba ufuna ukusebenzisa elinye igama, nceda ukhethe okanye usete ngokufanelekileyo:
nqakraza i iqhosha, kwaye DataNumen PDF Repair Ndiza start ukuskena nokulungisa imvelaphi PDF ifayile. Inkqubela phambili yebha
Emva kwenkqubo yokulungisa, ukuba ngaba umthombo PDF ifayile inokulungiswa ngempumelelo, uya kubona ibhokisi yemiyalezo enje:
Ngoku ungavula i-fixed PDF fayile ngeAcrobat Reader okanye enye PDF izicelo ezihambelanayo.
DataNumen PDF Repair 2.6 ikhutshwa nge-21 kaDisemba, 2020
DataNumen PDF Repair 2.4 ikhutshwa nge-6 kaNovemba ngo-2020
DataNumen PDF Repair 2.3 ikhutshwa nge-11 kaNovemba ngo-2019
DataNumen PDF Repair 2.1 ikhutshwe nge-31 ka-Agasti ka-2013
DataNumen PDF Repair 2.0 ikhutshwa ngo-Matshi 16, 2009
DataNumen PDF Repair 1.0 ikhutshwe nge-4 ka-Agasti ka-2005
Isixhobo esinamandla sokufumana kwakhona iAcrobat eyonakeleyo PDF iifayile.